Nakidzwa nemifananidzo yako yaunofarira kubva kuZiviso Center ine GRIDy | IPhone nhau
Nakidzwa nemifananidzo yako yaunofarira kubva kuZiviso Center ine GRIDy
Sezvo iOS ichibvumidza vanogadzira kushandisa nzvimbo yekuzivisa kuti vawedzere majeti anoratidza ruzivo rwakanangana nekushandisa, vazhinji ndivo vanogadzira vakasarudza kuita basa iri. Kugona kuwana iyo Notification Center ine mudziyo wakakiiwa pasina kufambisa foni inotiponesa yakawanda nguva, sezvo ichitidzivirira isu kuti tivhure iyo terminal uye tarisa kunyorera kwatinoda kubvunza. Asi aya majeti haasi ekungotibatsira chete zuva nezuva, asiwo anotibvumidza kuti tiwedzere ruzivo rwatinofarira kubvunza nguva nenguva, senge edu mapikicha avanofarira.
GRIDy chikumbiro chine mutengo wenguva dzose we1,99 euros muApp Store, kunyangwe kwenguva yakati wandei inogona kutorwa mahara. GRIDy inotibvumidza isu kuwedzera edu anodiwa mafoto kuti tikwanise kuabvunza iwo zvakananga kubva kuNotification Center. Iko kunyorera kunotibvumira kuti tigadzire akasiyana maalbab uko isu tinowedzera mifananidzo iyo yatinogara tichida kuve nayo, mifananidzo iyo yatinogona kuwedzera nekungodzvanya pairi. Dambarefu rega rega rinogona kuratidza kugoverwa kwakasiyana kwemifananidzo kubva pa1 × 1 kusvika pa8 × 8… Kana tichida kuwedzera mifananidzo kana ikaratidzwa muchiratidziri chizere tinogona kuzviita sezvatinoita nemufananidzo chero upi pafirimu redu, tichishandisa zvigunwe zviviri .
Pamusoro pezvo zvinotibvumidzawo kudzivirira chero munhu kuti asavabate kana vakasashandisa Touch ID kutanga. Nenzira iyi, kuvanzika kwedu hakugone kukanganiswa kana tikasiya foni isina kutarisirwa kubasa kwedu, semuenzaniso. Asi haingotitenderi chete kuti tiwedzere mifananidzo, nekuti zvakare inotsigira mafaera eGIF fomati, yakanakira vanoda aya marudzi emafaira avo vanogara vachida kuva navo parutivi kuti varatidze shamwari dzavo. GRIDy inongowanikwa muChirungu, Korean neJapanese, asi mashandiro ayo akapusa uye mutauro wekushandisa hauzove chipingaidzo kuushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Nakidzwa nemifananidzo yako yaunofarira kubva kuZiviso Center ine GRIDy
RuvaraFlow 3 kuti uwane pfungwa yekutamba kwako skrini